यौन र जीवन – Page 10 – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
एजेन्सी/ रमाइलोका लागि जोखिमपूर्ण काम गर्ने मानिसको कमी संसारमा छैन । मनोरञ्जन लिन अग्लो भवनबाट फाल हान्ने, अग्लो भवनलाई टेको बनाएर बाँधिएको डोरीमा हिँड्ने गरेको देखिँदै अथवा सुनिँदै आएको छ । स्पेनिस आर्मीका दुई जवान यस्तै एडभेन्चर लभर छन् । तालिमका क्रममा साहसीपूर्ण काम गर्न उनीहरू असाध्यै रुचाउँछन् । ती जवानले विमानबाट कुकुरसहित..
पूरै गाउँ नै विक्रीमा !
अमेरिकाको पूर्वी हद्यामस्थित जोन्सोनभिल्ले गाउँ नै विक्रीका लागि राखिएको छ । सो गाउँको मूल्य न्यूयोर्कको एउटा अपार्टमेण्टबराबर राखिएको छ । सन् १८३० मा स्थापना गरिएको सो गाउँको क्षेत्रफल ६२ एकड रहेको बताइएको छ । करीब १६ वर्षसम्म त्यसै अलपत्र छोडिएको सो क्षेत्र हाल भने विक्रीका लागि अक्शन डट कममा राखिएको छ । गाउँ विक्रीकोे लीलामीमा..
तपाई आफ्नी श्रीमतीलाई खुसी राख्न के गर्नु हुन्छ ?
तपाई आफ्नी पाट्नर या श्रीमतीलाई खुसी राख्न के गर्नु हुन्छ ? नयाँ नयाँ गिफ्ट या मिठा खानेकुरा ल्याएर फकाउनु हुन्छ होला । तर अब उनीहरुलाई खुसी राख्न त्यती कष्ट गर्नु पर्दैन । मात्र कपडा धोईदिए पुग्छ । व्रिटेनमा भएको एक अध्ययनले यस्तो पत्ता लागेको हो । खाना बनाउन देखि घरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी घरको गृहिणीकै हुन्छ । काम गर्दा गर्दै ..
बिहे सकिनासाथ जन्मियो बच्चा
न्यूजिल्याण्ड । न्यूजिल्याण्डमा एक दम्पत्तीले बिहे गर्नासाथ सन्तान सुख पाएका छन् । लिज र मारियोले बिहेको केही घण्टामै छोरी पाएका हुन् । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार बिहेकै समयमा मारियोलाई प्रश्रव बेदना भइरहेको थियो । त्यसैले उनीहरुको बिहेको कार्यक्रम चाँडो सक्नु परेको थियो । हतार हतार गरेर बिहेको कार्यक्रम सकेर मारियो अस्पताल..
हुेर्नुहोस्, संसारका चर्चित ७ सेक्स बजार !
एजेन्सी । पछिल्लो समयमा सेक्स बजार विश्वमा नै फस्टाउँदै गएको छ । कतिपय देशहरुमा यौन बजार वैध छ भने कतिपय देशहरुमा बर्जित भएपनि गोप्य रुपमा सेक्स बजार फस्टाइरहेको छ । ती मध्ये केही सेक्स बजार यस्ता छन् । डोमेनिकन गणतन्त्र विश्व सेक्स बजार मध्ये क्यारेबियन राष्ट्र डोमेनिकन रिपब्लिक सबैभन्दा अगाडि मानिन्छ । यहाँ ६० हजार महिला यौनकर्मी..
८ श्रीमतीको ६० सन्तान एकाघरमै मिलिजुली परिवार
दमारबेंसी (अर्घाखाँची), मंसिर १७ - कानुन र समाजमा एकभन्दा बढी विवाह गरेमा कारबाही खेप्नुपर्ने हुन्छ । कसैकसैले भने बहुविवाह गरे पनि सौता-सौताबीचको दिनरातको कलझगडाले टाउको समाएर बसेका देखिन्छन् । 'दुई श्रीमतीको पोइ कुना बसी रोइ' भनिँदै आए पनि जुलुके, दमारबेंसीका ७१ वर्षीय टानबहादुर पुलामीले भने आठ श्रीमती भित्र्याए पनि परिवारमा दुःख..
यस्तो हुन्छ महिला कण्डम
महिला कण्डमको प्रयोग बहुतै फाइदाजनक छ साथै यसका विशेषता पनि कम छैनन् । सायद महिला कण्डमका विषयमा महिलाहरु अझै कन्फ्युज छन् होला तर महिला कण्डम गर्भ निरोधक साधन मात्र नभएर सम्भोगको समयमा मानसिक चिन्तामुक्त राख्न पनि लाभदायक छ । जानौं महिला कण्डमका विशेषता १. महिला कण्डमको प्रयोग जति जति फाइदाजनक छ त्यति नै लगाउन पनि सजिलो छ किनकि..
स्मार्टफोन बोक्ने तरुनी-तन्नेरीले गर्छन् बढि सेक्स
स्मार्टफोन बोक्ने किशोरकिशोरीहरुले अरु साधारण मोबाइल फोन बोक्ने साथीहरुको तुलनामा बढि सेक्स गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । साथै मोबाइल फोनमै इन्टरनेटको सुविधा उपयोग गर्ने टिनएजर्सहरुले अनलाइन मार्फत विपरित लिंगीसाग सम्पर्क गर्न नपाउनेहरुलेभन्दा सेक्सको मौका दोब्बर बढि पाउने समेत अध्ययनले खुलासा गरेको छ । साउथ..
बाँदरको बिहेमा मानिस जन्ती
बिहारको बेतिया सहरमा एउटा अनौठो घटना घटेको छ । सहरवासी उदेश महतोले आफ्नो पाल्तु बाँदर रामु र बाँदर्नी रामदुलारीको धुमधामका साथ बिहे गराएका छन् । बिहेमा उदेशले इष्टमित्र, छरछिमेकलाई आमन्त्रण गरेका थिए । बिहेको जन्ती उदेशको घरबाट राति निस्किएको थियो । पेसाले भरिया उदेशले रामुलाई नेपालमा करिब सात वर्षअघि फेला पारेका थिए । एक वर्षअघि..
जहाँ तरबारले कपाल काटिन्छ
सैलुनमा कपाल काट्न कैँचीको प्रयोग भएको हामीले देखेका छौँ । तर, भियतनाममा एकजना हेयरड्रेसर छन्, जो कपाल काट्न सामुराई तरबार प्रयोग गर्छन् । गुयेन होंग हुंग नामका ती हेयरड्रेसर कैँचीले जत्तिकै छिटो र कलापूर्ण तरिकाले कपाल काट्न सक्छन् । मानिसहरू जब उनले तरबारले कपाल काटेको देख्छन्, आश्चर्यले जिब्रो टोक्छन् । चार वर्षपहिले एउटा..
आमाको शवसँगै ५ वर्ष सुतिन् महिला
सन् २००९ मा मृत्यु भएकी आफ्नी आमाको शवलाई अन्त्येष्टि गर्नुको साटो एक महिलाले ओछ्यानमै सुताएर आफु पनि सँगै सुतिरहेको रहस्य खुलेको छ । जर्मनीको म्युनिखस्थित ब्लुमेनाउकी एक महिलाले आफ्नी आमाको शवलाई पाँचवर्षसम्म घरभित्रै राखेको तथ्य खुलेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरेको छ ।नाम नखुलाइएकी ती महिलाले..
एकै पटक सत्र बच्चाको जन्म, ‘बच्चाहरु आएको आयै, आएको आयै !’
अमेरिकाकी एक महिलाले एकै पटकमा १७ बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । उनले २९ घन्टाको अवधिमा त्यतिका संख्यामा बच्चालाई जन्म दिएर रेकर्ड नै कायम गरिकी छन् । अमेरिकाको इन्डियनपोलिस मेमोरियल अस्पतालमा शल्यक्रिया गरि ती बच्चा निकालिएको हो । शल्यक्रियामा संलग्न डा. ज्याक मोर्रोले यो घटना निकै अतुलनीय भनेका छन् । ‘बच्चाहरु आएको आयै, आएको..
तामाङ सास्कृतिक चलचित्र -स्ह्यालगर (सगुन) पहिलो बिशेष च्यारिटी
तामाङ समुदायको सांस्कृतिक एबं समाजिक पक्षलाई उजागर गर्दै ल्हाप्साङकर्पो म्युजिकको ब्यानरमा छारमाया तामाङले निर्माण गरिएको चलचित्र स्ह्याल्गर(सगुन) को पहिलो बिशेष च्यारिटी बौद्धस्थीत सिद्धार्थ सिने हलमा मंसिर ५ गते शुक्रबार बिहान ८ः०० बजे बिशेष समारोहका बिच प्रदर्शन गरियो । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं ३ का सभासद शेर बहादुर तामाङ को..